EPP Mahavelona: nametrahan’ny Airtel tambajotra 4G | NewsMada
EPP Mahavelona: nametrahan’ny Airtel tambajotra 4G
Nanampy tamin’ny fanomezana fitaovam-pianarana ho an’ireo ankizy ao amin‘ny EPP Mahavelona, ny Airtel Madagascar, tamin’ny fidiran’ny mpianatra. Ankizy 350 nampian’ny Airtel notoloran’ny tale jeneraly, Maixent Bekangba, fitaovam-pianarana karazany maro (kitapo, stylos, fandokoana …) fampiasan’ireo mpianatra amin’ny ambaratonga voalohany ireo.
Ampiana amina fanabeazana nomerika koa io sekoly fanabeazana fototra io avy amin’ny fampiasana tambajotra matanjaka 4G. Araka izany, nanokanana efitra ho an’ny informatika misy Laptops sy tambajotra matanjaka io sekoly io. « …Mariky ny fanohizana ny fandraisana anjaran’ny orinasanay ho an’ny fanabeazana sy ny fampandrosoana maharitra izao. Amin’ny maha avo lenta ny teknolojia fampiasanay, rariny raha misy fifandraisana amin’izao tontolo izao ny sekoly aty ambanivohitra », hoy i Maixent Bekangba.
Mahazo fanohanana avy amin’ny Airtel Madagascar hatrany ny EPP Mahavelona amin’ny fanaovana efitra fianarana, famakiam-boky, fanomezana vatsim-pianarana, fanampiana ireo mpampianatra, sns. « Manampy betsaka ny ankizy hilamina sy hanohizana ny fifandraisana any ivelany amin’izao taom-pianarana izao ny teknolojia vaovao nomena azy ireo », hoy ny talen’ny EPP Mahavelona, Razafiarimanana Norosoa. Ny Tetibolan’ny minisiteran’ny Fanabeazana tsy hita hanaovana izany na tsy hahafahana manampy ireny sekolim-panjakana ireny, fanabezana fototra sy ambaratonga faharoa.